UCID xisbi qaran baa la moodayay ee ma xisbi qabiil buu noqday maxay se Gabiley ka yidhaahdeen dadba wada yaab ye by Abdi Mustafe | Somaliland Today
← Xanuunkii Gabadhayda “Sheeko Gaaban” BY:Ismaaciil C.qaadir Ismaaciil “Maslax
Cali Khaliif Galaydho hadii Somaliland ay Khaatumo soo hor fadhiisanayso maxaannu Siyaad Barre uula dagaala maynay isagaaba ku dhaamay e →
UCID xisbi qaran baa la moodayay ee ma xisbi qabiil buu noqday maxay se Gabiley ka yidhaahdeen dadba wada yaab ye by Abdi Mustafe
Xisbiga Ucid waxa loo heystay in uu yahay xisbi Qaran ee waxay Gabiley ka cadeeyeen in uu yahay xisbi Qabiil. Dad ba wada yaab ye, Jamaal ma beel
qudha ayuu madaxweyne u noqonayaa miyaannu cid kaleba cod ka doonayn ileyn sidan Ucid hadalka u dhigtay waxay ku koobantay beel gaara e.
Waxa dadka ama kaag weyn ku reebtay oo intaaba ka si daran musharaxa Ucid Jamaal Cali Hussien oo goobtii ku weydiistay warbaahintii joogtay in ay TV yada ka sii daayaan isaga oo u jeeda si warku beesha uugu baaho oo loo wada maqlo hadaladaa qabiileysan ee qiirada lahaa ee gabadu ku tiiraan yootay ee ahaa Subeer Awal.
Diid madii Ucid Gabiley hore loogu diiday in ay soo galaan baaba loo qaatay oo loogu hiiliyey lana tuhmaayay inay yihiin xisbi qaran. Markii loo fasaxay inay Gabiley galaan sowtan kabahu ku-kulu laadeen ee xaal koodi qabiil dhaafi waayey. Xisbi siyaasiyi maaha intuu microphone qaato uu yidhaa yaa reer hebelaaaaaaaaaay.
Xaflada Gabiley ee lagaga hadaqayey Subeer Awal, siyaasiyiinta UCID ee fadhiday aad bay uugu qushuuceen in sidaa ay u hadasho gabadhii ku muusa-nowday hadaannu nahay Subeer Awal …. Waxa intaa ka sii daran oo goobta fadhiyey siyaasiintii Ucid uugu misaanka weynaa oo ay ka mid ahaayeen Cali Gurrey iyo Fadumo Siciid oo iyaguna u qushuuc sanaa, aadna uugu qoslay uuguna farxay weedhaa qabiilka iyo gabay goobta laga tiriyey oo Silaanyo lagu dhaleecey naayay. Ucid intaanay meel ba gaadhin waxay dadka fahan siiyeen in ay ku shaqeynayaan wax la yidhaa subeeriya, hase yeeshee mey garan in aan reer keliya cod kooda kursi lagu fuuli karin. Xafladaa Ucid ee Gabiley ka qabsoontay wax weyn bay xisbiga u dhintay oo bulshadu waxay u arkaan xisbi qabiil uuma se arkaan xisbi Qaran sidii markii hore loo heystay. Xisbiga siyaasiyiin tiisii uugu tunka weynaa qabiil qudha u sacabinayaan ee gudoomiya hooduna yahay Faizal Cali Waraabe oo sida geedka gabal dayaha gelin ba dhan u jeesta maxay bulshadu ka fili karaan??? Dhawaan bay ahayd markii Jamaal lahaa Faizal ilama tashan markuu madaxtooyada heshiiska la soo gelaayay ee dad ba la wada yaabay markay ogadded in khilaaf xoogani dhex yaal.Taagera yaasha Ucid waxa u fiican inay ku kala biiraan Kulmiye iyo Waddani kol hadii Ucid ay sidan u dhaqmayaan oo aanay cod badan ku heli doonin waqtiga dorashada..